११ जनाको परीक्षण गर्दा १५ जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ ! अन्योलमा वडा अध्यक्ष - Sidha News
११ जनाको परीक्षण गर्दा १५ जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ ! अन्योलमा वडा अध्यक्ष
काठमाडौं। सर्लाहीको रामनगर गाउँपालिका वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष राम सोगारथ तेली शुक्रवार बिहानैदेखि तनावमा रहे। उनको वडाका १५ जनाको कोरोना परीक्षणमा पोजेटिभ देखिएको समाचार फैलिएसँगै उनको तनाव बढेको हो। रामनगर गाउँपालिकाको ४ नम्बर वडामा रहेको तपस्वी जगदेव माविको क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरुमा कोरोना पोजेटिभ देखिएको हो। गत ७ गते भित्रिएका ११ जना र त्यसअघि आएका ४ जना वडा नम्बर ७ का बासिन्दा भएकाले उनीहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो।
वडा अध्यक्ष राम सोगारथ तेलीलाई संक्रमित देखिएकोमा तनाव भएको होइन रहेछ। तनाव त संक्रमितको संख्याले मात्र पारेको रहेछ। ‘जम्मा ११ जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको थियो ७ नम्बर वडाको,’ वडा अध्यक्ष तेलीले भने, ‘१५ जनामा संक्रमण देखियो भन्ने रिपोर्ट आयो।’ स्कुलमा रहेको क्वारेन्टाइनमा राखिएका सबैको थ्रोट स्वाब लिइएको थिएन। स्वाब नलिएकाकै कसरी पोजेटिभ आयो भन्ने विषयले उनलाई तनावमा पारेको हो। ‘४ जनाको पोजेटिभ कहाँबाट आयो अब कसरी बुझ्नु?,’ उनले भने।
आफ्नो गाउँ भित्रिएकाहरु मुम्बईबाट आएको थाहा पाएपछि उनीहरुलाई क्वारेन्टाइनमा बुझाइएको उनले जानकारी दिए। ‘पहिले नै ४ जना क्वारेन्टाइनमा थिए। बाँकी ११ जनालाई हामीले क्वारेन्टाइनमा बुझायौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो वडाका यतिमात्र हुन् क्वारेन्टाइनमा।’ मन्त्रालयको वक्तव्यले पूरै अल्मल्याउने गरी ठेगाना राख्दा उनीमात्र होइन धेरै अलमलिएका छन्।
भारतले भन्यो: ‘बुद्ध नेपालमै जन्मिएका हुन्,
‘कसैको घरमा पाहुना बन्न नजान, पाहुना
विद्यालय सञ्चालन गर्न आएका दुइ शिक्षक
उपत्यकाका यी क्षेत्रमा शुक्रबार र शनिबार विद्युत् का’टिने